स्वास्थ्य पेज » बाँकेमा कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज हुने र मृतकको संख्या कति पुग्यो ? बाँकेमा कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज हुने र मृतकको संख्या कति पुग्यो ? – स्वास्थ्य पेज
बाँकेमा कोरोना संक्रमित, डिस्चार्ज हुने र मृतकको संख्या कति पुग्यो ?
नेपालगन्ज १३, पुष ।
बाँकेमा सोमवार थप १८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । जिल्लाका तीनवटा प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परिक्षणमा ६ महिलासहित १८ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा १२, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरको प्रयोगशालामा ४ र बागेश्गरी प्रयोगशालामा २ गरी १८ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ हजार ३ सय ६७ पुगेको छ । त्यसमा महिलाको संख्या १ हजार ५ सय ९ र पुरुषको संख्या २ हजार ८ सय ५८ पुगेको छ ।
आज ७ जना संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ४ हजार २ सय ३ पुगेको छ । त्यसमा महिलाको संख्या १ हजार ४ सय ४५ र पुरुषको संख्या २ हजार ७ सय ५८ पुगेको छ । अहिलेसम्म बाँकेमा भाइरस संक्रमणबाट ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा महिलाको संख्या १५ छ भने पुरुषको संख्या २८ रहेको छ ।
बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि भेरी अस्पताल, मेडिकल कलेज कोहलपुर र वयेस्टर्न अस्पताल नेपालगन्जमा गरी ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा महिलाको संख्या १६ छ भने ५९ पुरुष रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।